Sida sariirta loogu sameeyo madaxa madaxa | Bezzia
Sida sariirta loogu sameeyo madaxa madaxa
Toñy Torres | 14/10/2021 10:00 | Samee naftaada
Qurxinta guriga oo leh maryo ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo keeno diirimaad iyo diirimaad qolalka oo dhan. Waxay xitaa kuu oggolaaneysaa suurtogalnimada in si fudud loo dayactiro qurxinta, iyada oo waxoogaa isbeddelo yaryar ah iyo maalgashi dhaqaale oo ugu yar. Sababtoo ah uma baahnid inaad noqotid khamiisle khabiir ah, ama aad haysato aaladaha ugu fiican ee lagu tolo, maadaama maanta ay jiraan waxyaalo kale oo aad waxtar u leh si loo abuuro dhammaan noocyada walxaha leh dharka.
Xaaladdan waxaan u abuuri doonnaa madax madax ah oo sariirta ah, gabal qurxin ah oo waliba noqon doona mid aad waxtar u leh. Markaad rabto inaad xoogaa waqti ku qaadato wax -akhriska ka hor sariirta ama haddii aad rabto inaad jiifsato daawashada TV -ga, uma baahnid inaad hesho barkimo badan. Maadaama uu madaxaaga gaarka ahi ku caawin doono jiifso adigoon ku meeraysan inaad dhigto barkimooyinka. Aad wax ku ool ah, qurxin leh oo sahlan in laba mid mid loo sameeyo.
1 Sida loo sameeyo madaxa madaxa
1.1 Qalabka U Baahan Yahay
1.2 Tallaabooyinka lagu abuurayo madaxa madaxa lagu sameeyo ee gacanta lagu sameeyo
Sida loo sameeyo madaxa madaxa
Habka ugu fudud ee loo abuuro madax madax ah waa in la helo mashiinka tolidda. Waa tollayn aad u fudud oo aad samayn karto xataa haddii aadan ahayn tolle -kaneed khabiir ah. Sidoo kale waxaad heli kartaa mashiinka tolidda gacanta, aalad aad u jaban oo aad ku samayn karto qabanqaabo yaryar oo aad ku abuuri karto waxyaabo fudud oo kan oo kale ah.
Ugu dambayntii, waxaad had iyo jeer haysataa ikhtiyaarka aad ku tolan karto gacanta. In kasta oo natiijadu aysan la mid noqon doonin tii lagu helay tolidda mashiinka, Wali waa shaqo farsamo oo kala duwanaansho kasta ayaa noqon doonta waxa ka dhiga mid gaar ah. Iyada oo leh seams aad u aasaasi ah iyo dulqaad badan, waxaad ku abuuri kartaa madaxaaga dharka guud ahaan shaqsiyeed.
Marka hore waa inaan cabbirnaa derbiga si aan u qaadno cabbiraadaha lagama maarmaanka u ah alaabta. Guud ahaan, madaxa madaxa waa inuu cabbiraa si la mid ah sariirta ama dhowr sintimitir oo dheeraad ah, inkasta oo aad tahay walxo gebi ahaan gacanta lagu sameeyay waxaad dooran kartaa qiyaasta aad rabto. Hal sariir, waxa ugu habboon ayaa ah in la sameeyo hal barkin oo madax ah. Markay timaaddo sariir weyn, waxaan kala dooran karnaa inaan samayno hal ama laba gogo '.
Wixii sariir 90 sentimitir ah kuwani waa agabka aan u baahan doono.
Dhar shiraac ah, oo leh jir iyo iska caabin muddo dheer soconaysa. Cabbiraadda ugu dambaysa waxay noqon doontaa 1 mitir oo ballac ah iyo 80 sentimitir. Markaa waxaan u baahan doonnaa laba xabbadood oo maro ah 1,20 sentimitir ballac ahaan 1 mitir, cabbirradan waxay tixgelinayaan gunnada tolidda.
Saabuun xirmada tolidda ama sumadeeyaha.
Irbad iyo dun ama mashiinka tolida.
Usha daah ee cabbirka lagama maarmaanka ah iyo qaar ka mid ah taageerooyinka lagu xidho baarka derbiga.
Buuxinta fiber loogu talagalay barkimooyinka.
4 botones weyn.
Tallaabooyinka lagu abuurayo madaxa madaxa lagu sameeyo ee gacanta lagu sameeyo
Marka hore waxaan cabbir ka qaadan doonnaa dharka. Waxaan ku sawireynaa leydi cabbirka saxda ah iyo mid kale oo leh qiyaastii 5 sentimitir oo kala -goys ah. Tani waxay ina caawin doontaa markaan tolayno haddii aanaan aad ugu xeel -dheeraan arrimahan.
Waxaan goynay marada cirifka dibadda.
Kahor intaanan ku biirin qaybaha aan u soconno ku dhammee cidhifyada marooyinka oo leh jajab, habkan waxaan uga hortegi doonnaa inay is -yaacaan.
Hadda waxaan dooneynaa inaan abuurno cirif dhinac ka mid ah ballaca, hubinta inay aad u qurux badan yihiin.
Waxaan sii wadnaa inaan tolno gogosha dharka, tan darteed waan wajahaynaa oo waxaan ku tolannaa 3da dhinac ee haray. Inaan ka tagno qaybta aan ka dhignay cirifka annagoo ku biirin.
Waan rognaa oo saxanka ayaan dhaafnaa iyada oo loo marayo seams si ay aad u siman yihiin.
Hadda waxaan abuureynaa qaar ka mid ah suumanka suunka, kiiskan waxaan u baahan doonnaa 4 cabbir ah hal mitir ballaaran. Cabbiradu waxay noqon doonaan dherer 20 sentimitir iyo 8 ballaaran. Waxaan ka tagnaa gunnada tolidda, waxaan gooynnaa gogosha dharka, waxaan cidhifsaneynaa cidhifyada oo waxaan tolannaa qeybaha ka soo horjeeda, iyadoo hal dhinac aan la tolayn. Waxaan u rogaynaa gabalkii, saxankii baan dhaafinnaa oo dhinacii maqan ayaan tolannaa.
Si loo dhammeeyo suumanka suunka aan samayno godad badhanno, waxaad isticmaali kartaa mashiinkaaga tolidda ama gacanta ayaad ku samayn kartaa.
Waxaan ku dhejineynaa siddooyinkii dharka Si aad u ogaato meesha aad dhigto badhamada, hubso inay dhammaan isku masaafo yihiin.
Hadda waxaan ku tolannaa badhamada baqshadda marada.
Waxaan tolannaa suumanka suunka dhinacyadiisa midkood xagga dambe ee madaxa madaxa.
Waxaan ku xirnaa badhamada iyo waxaan ka buuxinnaa madaxa dhexda loogu talagalay barkimooyinka.
Waxaan hore u haysannay madaxii dharka ee dhammaaday, kaliya waxaan ku qasbanaannaa inaan ku dhejinno taageerooyinka usha daah derbiga. Geli baarka siddooyinka looxyada madaxa saaran oo dul saar sariirtaada. Galabtii tolidda waxaad diyaarin doontaa madaxaaga cusub si aad u siiso hawo ka duwan qolkaaga jiifka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Samee naftaada » Sida sariirta loogu sameeyo madaxa madaxa